SideChef: 15K + ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ အစားအစာအစီအစဉ်များ၊ ကုန်စုံစာရင်း Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » SideChef: 15K + ချက်ပြုတ်နည်း, စားသောက်အစီအစဉ်များ, ကုန်စုံ Lists မ
SideChef: 15K + ချက်ပြုတ်နည်း, စားသောက်အစီအစဉ်များ, ကုန်စုံ APK ကို Lists
အချိန် Save, ငွေကြေးနှင့် SideChef နှင့်အတူကျန်းမာသန်စွမ်းကိုစား! သင့်ရဲ့အစားအစာနှင့်အရသာများအတွက်စိတ်ကြိုက်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အတူ 10 မိနစ်ထက်လျော့နည်းအတွက်ရက်သတ္တပတ်အဘို့သင့်အစားအစာကြိုတင်စီစဉ်ထားပါ။ SideChef သည်လည်းငါတို့ချက်ပြုတ်ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့်တာဝန်ယူထားသောအပတ်စဉ်မုန့်ညက်စိတ်ကူးများပေးပါသည်။ အမေဇုံလတ်ဆတ်တဲ့ဖြောင့်သင့်ရဲ့တံခါးကိုဖို့အားလုံးကိုပါဝင်ပစ္စည်းများကယ်နှုတ်တော်မူရှိသည်ဖို့ SideChef ရဲ့စျေးဝယ်စာရင်းအရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့!
ကိုယ်ပိုင်စာရွက်အကြံပြုချက်များယခုသင့်အစားအသောက်ဦးစားပေး (သက်သတ်လွတ်, သတ်သတ်လွတ်, Pescatarian, အနိမျ့-carb, Paleo), ပစ္စည်းဓာတ်နှင့်သည်းမခံ (gluten, ဥ, နို့, ပဲပုပ်, မြေပဲ, သစ်ပင်အခွံမာသီး, ငါး, ဂဏန်းကွက်) ကိုဖြည့်တင်း။
SideChef ရဲ့မစ်ရှင်သင်နှင့်သင့်ချစ်ရသူအဘို့, စမတ်ချက်ပြုတ်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ : SideChef, သင်စီစဉ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ tools များပေးသည်ဆိုင်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူချက်ပြုတ် - ပဲထိပ်တန်းအစားအစာဘလော့ဂါများ, စာရေးဆရာများနှင့်ကျော်ကြားသောစားဖိုမှူးဆီကနေ 15,000 + step-by-step ပဲ့ထိန်းချက်ပြုတ်နည်းများ curating ထက်ပို
* အစားအစာအစီအစဉျ: (free!) SideChef ရဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အပတ်စဉ်ထုတ်မုန့်ညက်အစီအစဉ်များကိုသုံးပြီးတစ်ပတ်စားရန်အဘယ်အရာကို Organize သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြည့်စွက်။
* တျသှငျးခံရ: သင်၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကိုအထင်ကြီးအသစ်စာရွက် collection များကိုရှာဖွေလေ့လာမည်!
* ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ် Create: တဦးတည်းအဆင်ပြေရာအရပျထဲမှာသင်အကြိုက်ဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ Organize ။
🛒 Shopping 🛒
* အမိန့်ကုန်စုံဆိုင်များ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့မုန့်ညက်စီမံသို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်နည်းများထံမှတဦးတည်းဈေးဝယ်စာရင်း Create, နဲ့ Amazon လတ်ဆတ်ဖြင့်ကယ်လွှတ်အရာအားလုံးကိုရှိသည်။
* ဝေမျှမယ်: သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှကို Message သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်စျေးဝယ်စာရင်း။
* ကွတ် သာ. ကောင်း၏: ခြေလှမ်း-by-step ဓါတ်ပုံ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံညွှန်ကြားချက်စို့နှင့် CookAssist နည်းပညာအရသာရှိတဲ့ရလဒ်များကိုမှသငျသညျကိုလမ်းပြ။
* ရှာရန်: သင်ပြီးသားရှိတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းများအပေါ်အခြေခံပြီးချက်ပြုတ်နည်းများကိုရှာပါ။ သို့မဟုတ်သင်နှင့်သင့်ချစ်ရသူပျော်မွေ့လိမ့်မည်ဟုချက်ပြုတ်နည်းများကိုလိုက်နာဖို့, အရသာကျန်းမာလွယ်ကူတက်ကြည့်ရှု!
* Filter ကို & စီ: သင်၏အစားအစာများအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများရွေးချယ်ပါ, အချိန်, ပန်းကန်သို့မဟုတ်အစားအစာများကသူတို့ကို sort ။
* အခုတော့ CookAssist နည်းပညာနှင့်အတူ! သငျသညျအဝေးမှ 2,000 + CookAssist နှင့်သင်၏သဟဇာတစမတ်ကရိယာစမတ်ချက်ပြုတ်နည်းများ enabled ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုများသော CookAssist စမတ်ချက်ပြုတ်နည်းများနေ့တိုင်းဆက်ပြောသည်နေကြသည် enabled ။
* ကျနော်တို့ပြီးသား LG နှင့် GE နှင့်အတူလက်တွဲတည်ဆောက်ပြီးသွားပြီ, သင်သည်သူတို့၏ Wi-Fi-enabled ကရိယာကိုချိတ်ဆက်နှင့် SideChef ရဲ့ step-by-ခြေလှမ်းစမတ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အတူချက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်။ ပိုများသောပစ္စည်းမိတ်ဖက်ဒါညှိနေဖို့မကြာမီလာမယ့်ကြသည်!
* သင့်ရဲ့ LG က SmartThinQ အကောင့်ချိတ်ရန်နှင့် SideChef CookAssist နည်းပညာကိုအဝေးမှသင့်ရဲ့သဟဇာတ LG ကစမတ်မီးဖိုနှင့်ပ္ပံထိန်းချုပ်ကြကုန်အံ့။
ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့အစားအသောက်လိုအပ်ချက်, ချက်ပြုတ်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အကြိုက်ဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများပြောပြရန် * တစ်ဦးကနဦး3ခြေလှမ်းစစ်တမ်း
* အစားအစာ (ဥပမာသက်သတ်လွတ်, သက်သတ်လွတ်, gluten-အခမဲ့, paleo low-carb), ပန်းကန်အားဖြင့်ရှာရန်ချက်ပြုတ်နည်းများ (ဥပမာညစာ, နေ့လည်စာ, ပင်လယ်စာ, အချိုရည်။ ဟင်းချို), အစားအစာ (ဥပမာအမေရိကန်, အာရှ, အီတလီ, မြေထဲပင်လယ်, မက္ကဆီကန်, တရုတ် , ဂျပန်, ကိုးရီးယား, အိန္ဒိယ, ပြင်သစ်, အိန္ဒိယ), နှင့်အချိန်
* သင့်ကိုယ်ပိုင်ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ် Create
အဝေးကနေသင့်ရဲ့သဟဇာတစမတ်မီးဖိုနှင့်ပ္ပံထိန်းချုပ်ဖို့ * CookAssist
The New York Times သတင်းစာအားဖြင့် Featured, ABC News, Forbes မဂ္ဂဇင်း, က Wired, USA Today က The Guardian သတင်းစာက The Wall Street Journal က, ရီးရဲလ်ရိုးရှင်းသော, Business Insider ။
သငျသညျအမွဲစွပ်ပြုတ်ခြောက်သွေ့ညှိုးနွမ်းစေတာနေနှင့်သင်ရုံဿုံမာနထောင်လွှားချောကလက် chip ကို cookies များကိုအောင်မြင်ရန်မထင်နိုင်လျှင် "ဒီအခမဲ့ app ကိုအသစ်ရဲ့ချက်ပြုတ်အဖော်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြကုန်အံ့။ "- ရီးရဲလ်ရိုးရှင်းသော
"သင်အစဉ်အဆက်သောကြောင့်, အချိန်ကိုက်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းအချိုးအစားအတွက်ထင်ရသောအလွန်သေးငယ်သောအမှားတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုမုန့်ညက်ပျက်စီးင့်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အ app တစ်ခုရှိသည်။ " - Business Insider
* Fixed: အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်မုန့်ညက်အစီအစဉ်ကနေစျေးဝယ်စာရင်းချွေတာသည့်အခါ
* Fixed: မုန့်ညက်အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းစာရွက်က default အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အရွယ်အစားကယ်တင်တော်မူ၏, ဝတ်ပြုအရွယ်အစားမရွေးချယ်
* Fixed: စာရွက်တစ်ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်မှချက်ချင်းကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးအဖွဲ့ကထောက်ပံ့များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! က Love, ကမုန်း? ဒီ patch ကိုပေါ်မဆိုတုံ့ပြန်ချက်များအတွက်အီးမေးလ် support@sidechef.com ။
SideChef: 15K + ချက်ပြုတ်နည်း, စားသောက်အစီအစဉ်များ, ကုန်စုံ Lists မ
48.53 ကို MB